မောင်ဒိုင်း၏ သရော်စာများ: ဘယ်ပြေးမလဲ..မိရွှေသန်း
ဒီနေ့တော့ ရေးစရာတခုခု စဉ်းစားနေရင်းနဲ့ email ထဲမှတယောက်က ပို့ပေးလာတဲ့ ကြခတ်ဝိုင်းဆရာတော်ရဲ့ အသံ File ကိုပြန်နားထောင်မိတယ်လေ
ရောဂါကြွင်း ရောဂါကျန်လဲ မထားနဲ့
ကြွေးကြွင်း ကြွေးကျန်လဲ မထားနဲ့
ရန်ကြွင်း ရန်ကျန်လဲမထားနဲ့ တဲ့လေ
အခါသင့်လာရင်တော့ ဘုန်းကြီးကိုလဲ ကျုပ်တို့က ချန်ထားကြမှာတော့ မဟုတ်ဘူးဗျို့
ဒီအကြံဘုန်းကြီးဘဲပေးတာနော် နောက်မှကျုပ်ကို အပြစ်တော့မပြောနဲ့
ဘုန်းကြီးဘဏ္ဏာကို ဓါးပြတိုက် သီလရှင်တွေကို မုဒိန်းကျင့်…
ပြည်သူတွေကို ဆင်းရဲတွင်းနက်ထဲ ပို့နေချိန်မှာ…
သူတို့ အမျိုးအဆွေတွေကတော့ ပြည်ပမှာစာသင်တဲ့သူကသင်
စီးပွားရေးသောင်းကျန်းရင်း ကြီးပွားပြီး အပြီးအပိုင်နေသူကနေ…
တချို့ဆို သောက်ရှက်မရှိ Political Asylum ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်တောင် တောင်းလိုက်ပါသေးတယ်ဗျို့
ဒီတော့ကျုပ်တို့ကလဲ ကျူပင်ခုတ်မယ်ဆို အနီးဆုံးကျူငုတ်တွေကို စရှင်းကြတာပေါ့
ခုထုတ်လိုက်တဲ့ Sanction တွေထဲမှာ စစ်အသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ မိသားစုတွေ သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးတွေကိုပါ ဆန့်ကျင်ဖို့ပါပါတယ်
ဒါကြောင့်လဲ နိုင်ငံအတော်များများမှာ စစ်အသိုင်းအ၀ိုင်းက အမျိုးတွေကို Visa မပေးကြတော့ပါဘူး ဒါတင်မက ရှိပြီးသားလူတွေကိုတောင် Stay ကနေ Deny လုပ်တော့မှာပါ
ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ တာဝန်ကြေကြရအောင်
ကျွန်တော့်ကို ဘာလုပ်ပေးရမလဲ ဘာကူညီနှိုင်မလဲ တဖွဖွမေးလာသူတွေရှိပါတယ်
သူတို့စစ်တပ် အသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ပါတ်သက်သူတွေ မိတ်ဆွေတို့ ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာ အများကြီးပါ
ဒီလူတွေထဲမှာ မိတ်ဆွေတို့ အသိတွေ သူတို့နဲ့ ပါတ်သက်ဆက်စပ်နေသူတွေအများကြီးရှိမှာပါ
အဲဒိလူတွေရဲ့ အမည် အပြည့်အစုံ နေရပ်လိပ်စာ ဖုံးနံပါတ် တွေကို စုံစမ်းပါ
အရင်ဆုံးကျွန်တော့် ဒီ post က comments ထဲမှာ share လုပ်သွားပါ
ပြီးရင် အဲဒိနိုင်ငံရဲ့ Immigration ခေါ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ကိုဆက်သွယ်ကြပါ
ပြီးရင်ဒီလူတွေဟာ Sanction အလုပ်ခံထားရတဲ့ နအဖ ရဲ့ မိသားစုတွေဆိုတာ သတင်းပို့ပေးပါ
America မှာတော့ သတင်းရထားတဲ့ Asylum Applicant ၃၀ ကျော်လောက်ကို Deny လုပ်ပြီး Deportation ပေးလိုက်ပြီလို့သိရပါတယ် US ကတော့ပေါ်တင်ကို ကြမ်းနေပါပြီ
အခုကြားထားတာ Green Card နဲ့နေနေသူတွေကိုတောင် Deport လုပ်မယ်လို့သိရပါတယ်
ကျောင်းက Bulletin Board မှာ စာကပ်ပြီးဖြစ်ဖြစ် လက်ကမ်းစာစောင်တွေဖြန့်ဝေပြီးဖြစ်ဖြစ်
သူတို့ကားမှန်တွေခွဲပြစ် ကားကိုဆေးနဲ့မှုတ်ပစ် အိမ်ကိုပစ်နှိုင်ရင်ပစ် (ဘာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်)
သူတို့အိမ်နဲ့ ကျောင်းမှာ ရပ်ကွက်ထဲမှာ လုံခြုံမှုမရှိတော့တဲ့အထိ
အရှက်တကွဲဖြစ် နေစရာမရှိဖြစ်တဲ့အထိ ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြရမယ်
ဟဲဟဲ ကျူပင်ခုတ်ကျူငုတ်မကျန် ပေါ့ သန်းရွှေ နဲ့ ဘုန်းကြီး ဦးဗာလ ရယ်
ဗိုလ်ချုပ်ရူးကြီးတို့ရေ ခင်ဗျားတို့ မြေးလေးတွေပုံလေးတွေကိုသေချာကြည့်ထားပေတော့…
(မျိုးချစ် ၏ ခုခင်ဗျားတို့အလှည့်ဘဲဗျို့ နွဲ့မယ်တော့မကြံနဲ့)
Posted by dms at 12:24 AM
Labels: တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်, သတင်းအဖျင်း
Ko Ko ko said...
if we didn't know exactly, wht should we do4that. they always hide their dads' name , as everybody know ..but we know they r high officers' sons .. so wht should we do? @_@